Enterprise Tag Management ဆိုတာဘာလဲ။ အဘယ်ကြောင့်သင် Tag ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုအကောင်အထည်ဖော်သင့်သလဲ | Martech Zone
စက်မှုလုပ်ငန်း၌လူများအသုံးပြုသောစကားလုံးများရှုပ်ထွေးနိုင်သည်။ သင်က blogging နဲ့ tagging အကြောင်းပြောနေတယ်ဆိုရင်၊ ဆောင်းပါးအတွက်အရေးကြီးတဲ့ဝေါဟာရများကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည် tag ကို ၎င်းကိုလွယ်ကူစွာရှာဖွေ။ ရှာဖွေနိုင်သည်။ Tag စီမံခန့်ခွဲမှုသည်လုံးဝကွဲပြားသောနည်းပညာနှင့်ဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျနော့်အမြင်အရဆိုရင်တော့သူကညံ့ဖျင်းစွာနာမည်ပေးထားတာလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်စက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးရဲ့ဘုံအသုံးအနှုန်းဖြစ်လာတယ်။ ဒါကြောင့်ငါတို့ရှင်းပြမယ်။
Tag Management ဆိုတာဘာလဲ။
နောက်လိုက်မှတ်သား site တစ်ခုသည် site တစ်ခု၏ခေါင်း၊ ကိုယ်၊ သို့မဟုတ် footer တွင် script tag အချို့ထည့်နေသည်။ သင်သည်များစွာသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုပလက်ဖောင်းများ၊ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုစမ်းသပ်ခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်းခြေရာခံခြင်း (သို့) ပြောင်းလဲနေသောသို့မဟုတ် ဦး တည်သောအကြောင်းအရာစနစ်များကိုပင်သုံးနေလျှင်၎င်းသည်သင်၏အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်၏အဓိကပုံစံခွက်များထဲသို့ script များထည့်ရန်အမြဲလိုသည်။ Tag စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များ (TMS) သည်သင်၏ပုံစံခွက်ထဲသို့ထည့်ရန် script တစ်ခုနှင့်သင့်အားတတိယပါတီပလက်ဖောင်းမှတဆင့်အခြားအရာအားလုံးကိုစီမံနိုင်သည်။ tag စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကိုတည်ဆောက်ရန်သင်ခွင့်ပြုသည် ကွန်တိန်နာ သင်စီမံခန့်ခွဲလိုသော tags များကိုအသိဥာဏ်ရှိစွာစုစည်းနိုင်သည်။
တစ်ဦးအတွက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဖွဲ့စည်းပုံ၊ tag စီမံခန့်ခွဲမှုကစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့၊ ဝဘ်ဒီဇိုင်းအဖွဲ့၊ အကြောင်းအရာအဖွဲ့များနှင့်အိုင်တီအဖွဲ့များကိုတစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်လွတ်လပ်စွာအလုပ်လုပ်စေနိုင်သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်ဒီဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့သည်အကြောင်းအရာများသို့မဟုတ်ဒီဇိုင်းအဖွဲ့များကိုမထိခိုက်စေဘဲ၊ IT အဖွဲ့များထံတောင်းဆိုမှုများပြုလုပ်စရာမလိုပဲ tag များကိုတပ်ဆင်ပြီးစီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်။ ထို့အပြင်စီးပွားရေးအညွှန်းကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်းများသည်စစ်ဆေးရန်၊ ရယူရန်နှင့်ခွင့်ပြုရန်လိုအပ်သည် မြန်နှုန်းဖြန့်ကျက် နှင့်မှအန္တရာယ်များကိုလျှော့ချ ကြေကွဲ ဆိုက်သို့မဟုတ်လျှောက်လွှာ။
ဖြန့်ကျက်ခြင်းအပေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ post ကိုဖတ်ရှုဖို့သေချာပါစေ အီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေး tag ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုသင်၏ဖောက်သည်များအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုနှင့်ဝယ်ယူမှုအပြုအမူကိုဖြန့်ကျက်ရန်နှင့်တိုင်းတာရန်အတွက်အရေးကြီးသော tags ၁၀၀ စာရင်းပါရှိသည်။
သင်၏စီးပွားရေးသည်အဘယ်ကြောင့် Tag Management System ကိုအသုံးပြုသင့်သနည်း။
သင်ထည့်သွင်းလိုသည့်အကြောင်းရင်းများစွာရှိသည် tag ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် သင့်ရဲ့စစ်ဆင်ရေးသို့။
တစ်ဦးအတွက် စီးပွားရေးပတ်ဝန်းကျင် protocol, လိုက်နာမှုနှင့်လုံခြုံရေးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးသမားများကသူတို့၏ CMS သို့ script များအလွယ်တကူထည့်သွင်းခြင်းမှတားဆီးနိုင်သည် site script tag များထည့်ရန်၊ ပြင်ဆင်ရန်၊ အသစ်ပြောင်းရန်သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားရန်တောင်းဆိုမှုများသည်သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကြိုးပမ်းမှုကိုစီမံရန်သင့်စွမ်းရည်ကိုနှောင့်နှေးစေနိုင်သည်။ သင် tag tag စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်မှ tag တစ်ခုသာထည့်ပြီးကျန်စနစ်မှကျန်အရာအားလုံးကိုသာစီမံခန့်ခွဲရန်လိုအပ်သောကြောင့်၊ သင်၏အခြေခံအဆောက်အအုံအဖွဲ့သို့နောက်ထပ်တောင်းဆိုမှုတစ်ခုသင်လုပ်ရန်မလိုပါ။
Tag စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များကိုဖြတ်ပြီး powered နေကြသည် အကြောင်းအရာပေးပို့ကွန်ယက်များ ဒါကမယုံနိုင်လောက်အောင်မြန်ဆန်ပါတယ် သူတို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုတောင်းဆိုမှုတစ်ခုတည်းပြုလုပ်ပြီးနောက်တွင်သင့် site အတွင်း script များတင်ခြင်းအားဖြင့် ၀ န်ဆောင်မှုသည်မြစ်အောက်ပိုင်းတွင်မရှိလျှင်သင်၏ site သည်အေးခဲစေနိုင်သည့်ဖြစ်နိုင်ချေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်သည်။ ဤသည်ပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းနှစ်ခုစလုံးကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်သင်၏ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သင့်မြတ်စေရန်ကူညီလိမ့်မည်။
Tag စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များသည်အခွင့်အလမ်းများကိုပေးသည် ထပ်တူအမှတ်အသားပြုခြင်းကိုရှောင်ပါသင့်ရဲ့ဂုဏ်သတ္တိများအားလုံးပိုမိုတိကျတိုင်းတာမှုရရှိလာတဲ့။
Tag စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များကိုမကြာခဏကမ်းလှမ်း ပေါင်းစပ်အမှတ်နှင့်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုသင်မှတ်သားထားသည့်အဖြေများအားလုံးနှင့်အတူ။ မိတ္တူကူးခြင်းနှင့်ကူးယူခြင်းတန်ချိန်များစွာမလိုအပ်ပါ။ log in လုပ်ပြီးဖြေရှင်းချက်တစ်ခုစီကိုဖွင့်ပါ။
များစွာသော tag စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များသည်တိုးတက်ပြောင်းလဲလာပြီးခိုင်မာသည့်ဖြေရှင်းချက်များကိုပေးသည် အုပ်စုခွဲစမ်းသပ်ခြင်း၊ A / B စစ်ဆေးခြင်း၊။ သင်၏ site ပေါ်တွင်ခေါင်းစဉ်အသစ်သို့မဟုတ်ပုံရိပ်အသစ်တစ်ခုကိုစမ်းသပ်လိုပါသလား၊ ၎င်းသည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းသို့မဟုတ်ကလစ်နှိပ်ခြင်းနှုန်းကိုတိုးမြှင့်လား။ ညာဘက်ကိုတည့်တည့်သွားပါ!
အချို့သော tag စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များပင်ကမ်းလှမ်းသည် ပြောင်းလဲနေသော (သို့) ပစ်မှတ်ထားသောအကြောင်းအရာများကိုပေးပို့ခြင်း။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အကယ်၍ လာရောက်လည်ပတ်သူသည်ဖောက်သည်တစ် ဦး ဖြစ်လျှင်အလားအလာနှင့်ယှဉ်လျှင်သင်၏ site ၏အတွေ့အကြုံကိုပြောင်းလဲချင်ပေမည်။
10 Tag စီမံခန့်ခွဲမှု၏အကျိုးကျေးဇူးများ
ဒီမှာဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေသူများအတွက် tag စီမံခန့်ခွဲမှု၏ထိပ်တန်းအကျိုးကျေးဇူး ၁၀ ချက်၏အလွန်ကောင်းမွန်သောခြုံငုံသုံးသပ်ချက်အချက်အလက် Nabler.
Enterprise Tag Management System (TMS) ပလက်ဖောင်းများ
အောက်ပါစာရင်းတစ်ခုဖြစ်သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း tag ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းချက်tag အချို့စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် tag စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များ၏စွမ်းရည်များအကြောင်းရှင်းပြရန်ဤအရာအချို့တွင်ပါသောဗွီဒီယိုများကိုသေချာကြည့်ပါ။
Adobe အတွေ့အကြုံပလက်ဖောင်းစတင်ခြင်း - သင်၏စျေးကွက်ထဲတွင်ရှိသောနည်းပညာအားလုံး၏ client-side ဖြန့်ကျက်မှုများကိုစီမံရန်ကြိုးစားခြင်းသည်စိန်ခေါ်မှုများစွာနှင့်ကြုံတွေ့ရနိုင်သည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, အတွေ့အကြုံပလက်ဖောင်း Launch သည် API ကိုပထမဆုံးဒီဇိုင်းဖြင့်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်နည်းပညာဖြန့်ကျက်မှုများကိုအလိုအလျောက်ရေးသားခြင်း၊ လုပ်ငန်းအသွားအလာများထုတ်ဝေခြင်း၊ ဒေတာစုဆောင်းခြင်းနှင့်မျှဝေခြင်းနှင့်အခြားအရာများဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ၀ က်ဘ်စီမံခန့်ခွဲမှုသို့မဟုတ်မိုဘိုင်း SDK ဖွဲ့စည်းမှုကဲ့သို့သောအတိတ်ကာလ၏အချိန်ကုန်သောလုပ်ဆောင်မှုများသည်သင့်အားအများဆုံးထိန်းချုပ်မှုနှင့်အလိုအလျောက်ပေးမှုကိုပေးသည်။
ကြည်နူး - သင်၏ရောင်းချသူအမှတ်အသားများနှင့်အချက်အလက်အားလုံးကိုအလိုအလျောက်သိမြင်နိုင်သောမျက်နှာပြင်တစ်ခုမှတဆင့်၊ turnkey ရောင်းချသူပေါင်း ၁၁၀၀ ကျော်ပါဝင်သည်။ ဒေတာအလွှာ tag မန်နေဂျာမှတဆင့်သင်၏တိုးတက်ပြောင်းလဲနေသောနည်းပညာစုစုပေါင်းမှ ROI ကိုပိုမိုမြင့်မားသော ROI ကိုမောင်းနှင်နိုင်ရန်အတွက်နည်းပညာများနှင့်ကိရိယာများမှအကွဲကွဲအပြားပြားရှိသောအချက်အလက်ရင်းမြစ်များကိုစည်းလုံးညီညွတ်အောင်ပြုလုပ်ပါ။
Google က Tag ကို Manager က - Google Tag Manager ကသင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ် tags များနှင့်မိုဘိုင်း application များကိုသင်လိုချင်သည့်အခါတိုင်းအိုင်တီပညာရှင်များကိုခိုင်းစေခြင်းမရှိဘဲအလွယ်တကူနှင့်အခမဲ့ရယူနိုင်သည်။
Tealium iQ - Tealium iQ သည်အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်၎င်းတို့၏ဖောက်သည်အချက်အလက်နှင့် MarTech ရောင်းချသူများအား ၀ က်ဘ်၊ မိုဘိုင်း၊ IoT နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောကိရိယာများမှထိန်းချုပ်ရန်စီမံနိုင်သည်။ ကျော်တစ် ဦး ဂေဟစနစ်နှင့်အတူတပ်ဆင်ထားသည် 1,300 turnkey ရောင်းချသူပေါင်းစည်းမှု tags များနှင့် APIs များမှတစ်ဆင့်ကမ်းလှမ်းခြင်းကိုသင်သည်ရောင်းချသူ tags များကိုအလွယ်တကူဖြန့်ကျက်နိုင်ပြီးစီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်၊ နည်းပညာအသစ်များကိုစမ်းသပ်နိုင်သည်၊ နောက်ဆုံးတွင်သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
Tags: Adobe အတွေ့အကြုံကိုမိုဃ်းတိမ်ကိုပစ်လွှတ်Adobe အတွေ့အကြုံကိုပလက်ဖောင်းAdobe ပစ်လွှတ်Adobe tag ကိုမန်နေဂျာထစီးပွားရေးလုပ်ငန်း tag ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းအမှတ်အသားမန်နေဂျာgoogle tag မန်နေဂျာtag ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုtag ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်းtag ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်လက်ဖက်ရည်ကြမ်းTMS